Ihe edeturu tupu ofzụta Igwefoto Igwe - OMG Solutions
Igwe onyonyo eyi (BWC) abịala ogologo oge na obere oge site na ndekọ dị mfe naanị igwefoto vidiyo na igwefoto na-enye njiri mara nke na-ahụ maka ọdịmma na ịdịte aka. Site n'echiche nke obodo, igwefoto nwere uwe na-eme ka ndị uwe ojii na ndị nche nọrọ na-elezi anya na nghọta. Akparamagwa ndị ọrụ na njikwa onye uwe ojii na-ahụ ọfụma na mgbakwunye dị mfe igwefoto nwere ahụ na ngwa ha. Otu a na-aga maka ndị otu obodo; mkpesa na akpasu iwe megide ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa belatara nke ukwuu na gburugburu ebe akwa eyi uwe mmadụ nọ.
Nhọrọ igwefoto buru ibu n’ahịa a nwere ike ime ka ịhọrọ nke dị mma na-agbagha. Onye ahia ahia gha ebu uzo mara ihe ha choro. Ha na-achọ BWC maka ndị na-elekọta okporo ụzọ, ndị ọrụ naanị ya, ndị na-eche nche, ndị ọrụ ụlọ mkpọrọ, na ndị ọrụ mberede ndị ọzọ dịka ndị ọrụ ọkụ ma ọ bụ ndị ọrụ enyemaka. Ebe ọ bụ na enwere ike iji ihe ngosi akpụkpọ ụkwụ ahụ dị ka ihe akaebe n'oge ikpe ụlọ ikpe, ụlọ ọrụ aghaghị ijide n'aka na ngwaahịa ha na-agbaso ụkpụrụ dị iche iche gbasara ịnọgide na-enwe ntụkwasị obi nke ihe akaebe dijitalụ. Enwere ọtụtụ njirimara ndị a na-ahụkarị iji hụ na data guzosiri ike. Ọnọdụ ikike dị iche iche na-ahụ na onye uwe ojii ahụ nke yi igwefoto enweghị ụzọ iji gbochie vidiyo ahụ, ihichapụ ya, ma ọ bụ gbanwee ya.
dịka ọmụmaatụ, na njikwa mmanye iwu nke OMG na-ejikwa igwefoto Secure Mini Body Worn Camera na izo ya ezo [Na ihuenyo LCD] (BWC060) o nwere ikike ọkwa:
Onye ọrụ ahụ na-enye ohere ka ndekọ ma dị ndụ ka ị na-enyocha, mana enweghị nhichapụ faịlụ ma ọ bụ ohere ịnweta faịlụ edekọrọ
A ga-eji vidiyo AES256 na RSA2048 mechie vidiyo abụọ. Ọhaneze agaghị enwe ike ịnweta vidiyo ndị a n'agbanyeghị na ha tiwara igwefoto. Naanị ndị ọrụ nwere RSA n'onwe Key nwere ike ilele vidiyo ndị ahụ
Ndị a bụ ụfọdụ isi ihe ị ga - ebu n’uche tupu ịzụrụ igwefoto eyi.
A na-akwadebe kamera ndị eji arụ ọrụ na ndekọ ndekọ otu bọtịnụ na-eme ka ha dị mma maka ojiji mgbe ndị isi nọ n'ọhịa. Onye uwe ojii ahụ ga-enwe ike ịmegharị cam ahụ ngwa ngwa na ọnọdụ mberede. Ngwaọrụ ahụ kwesịkwara ime ka ndị ọrụ jikwaa ma chekwaa vidiyo ahụ na enweghị nhịahụ ebe ọ na-abụkarị usoro na-ewe oge.
Ntụkwasị obi na ntachi obi
Igwefoto dị oke egwu na-enweghị ike nwere ike imetụta arụmọrụ nchekwa ma gbochie ha ịrụ ọrụ ha. Ee, ha chọrọ ka ihe ndekọ ha bụrụ nke na-agwụ ike ma na-adigide ma oke ibu buru ibu nwere ike ịbụ ibu dị n'ụdị ọrụ. Dị ka Light Weight WIFI Law Enforcement Body-Worn Camera, Vidiyo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Night Night (BWC052) nwere ike itinye aka na akpa n’akpa uwe ma ọ bụ n’ihu uwe elu ka ịdekọ oge ọhaneze.
Ijikwa data igwefoto edekọtara dị ezigbo mkpa. N'ihi na nha ga - adị oke nha; ọ dị mkpa iweghachite na ịchekwa data kwesịrị ịdị mfe ma bụrụkwa onye a chịkwara. Ndị ọrụ nchekwa n'ihu na ndị mmanye iwu na-atụkwasị obi na vidiyo iji gosipụta na ha mere ihe adịghị mkpa ma ọ bụ ijide ndị na-eme mpụ. Maka nke a, ha kwesiri inwe ngwaọrụ dị mfe iji, ntụkwasị obi ma nwee nchebe. Ngwaahịa anyị nwere kaadị nchekwa SD n'ime maka nnukwu nchekwa data yana ọdụ dobere 20 iji chekwaa data ma fanyekwa ya.
Ugo na Nkasi Obi
Ibu ibu bu ihe di nkpa ma odi ya obi. Ngwaọrụ ga-agbakwu, ọ ga-adịrịrị gị mfe inweta ihe. Ọ bụ ezie na onye ọrụ ga-eme ka ịdị arọ ya ghara imebi ihe, ihe nha ya na ịdị ogologo ya. Ndị ụlọ ọrụ nchekwa achọghị ịzụ igwefoto na-adaba ngwa ngwa na ngwaọrụ ahụ kwesịrị inwe ngwaike na ngwanrọ dị ha mkpa maka mkpa ha.
OMG Iwu mmechi Igwefoto Isi nke Onye isi igwe (BWC056) nke egosiri na eserese dị mfe iyi karịsịa maka ndị chọrọ ịdekọ ọrụ ọ bụla na ndụ kwa ụbọchị, ndị ọrụ nchekwa nwekwara ike itinye isi na ọfụma. Ọ dị fechaa, obere mkpanaka, igwefoto vidiyo na-enweghị mkpanaka Weepe, adabara iji
Sony 8.0MP CMOS sensọ
1080P Full HD ndekọ
Oku Bluetooth na egwu egwu
Njikọ WIFI na njikwa APP
Kwesịrị ekwesị maka oge dị iche iche dịka nka tii, eserese, nri, azụ azụ, nnwale kemịkalụ, wdg. Kwado max 64GB TF kaadị iji mezuo ihe ị chọrọ.
Igwefoto a na-eyi n'ahụ na-adaba n'ihe egwu gburugburu ebe obibi mgbe niile. Ndị uwe ojii ga-enwe ike iguzogide ihu igwe ọ bụla na gburugburu ebe obibi ha na-arụ ọrụ. Mmiri ozuzo, snow na ọnọdụ ihu igwe ndị ọzọ nwere ike imetụta ogo nke ndekọ, ya mere ịzụta ihe ndekọ vidiyo nke na-arụ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ ọ bụla dị mkpa. Ndị uwe ojii anyị eyi Igwefoto (BWC004) inwe oghere lere anya nke iko 6G, ezigbo mkpebi fidio FHD, yana mgbochi mmiri IP67 nwere akụkụ nke 140 nwere ike ịrụ ọrụ na mmiri, snow na ọnọdụ ihu igwe ndị ọzọ.
Ndụ batrị nke BWC kwesịrị ikwe ka igwefoto rụọ ọrụ maka ihe ngbanwe ọ bụla na enweghị mgbagide ya. Onye ọrụ uwe ojii anaghị agba ọsọ mgbe niile kama ọ ga-agbanwu ma gbanyụọ onye uwe ojii ka iwu ndị uwe ojii chọrọ. Otu onye uwe ojii na-edekọ ihe dị ka awa abụọ ruo atọ na mbido awa asatọ. Oge iri ruo 12-hour na-achọ ogologo ndụ batrị, ngwaahịa anyị nwere ọtụtụ awa 16 awa nke ndụ batrị.
Uzo a na-ahụ anya nke BWC na-abụkarị n'etiti ogo 90 na 130. Mpempe oghere dị obosara nwere ike ịnwe karịa nke otu ebe, ma nye ozi karịa karịa achọrọ. Igwe oghere wider nwere akụkụ nwere ike ịchekwa foto ndị dị otú ahụ nke na-ahụghị nke onye ọrụ anya, igwefoto ndị uwe ojii Mini HD Body Worn, 12MP OV2710 140 XreeX digiri, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Ogologo Oge Ọrụ (BWC053) nke ogo dị karịa eserese nkịtị wee nye foto sara mbara.
Ndị ọrụ nchekwa na-arụ ọrụ ha ehihie na abalị; ya mere, ha chọkwara ọhụụ abalị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ BWC na-abịa na nhọrọ ọhụụ abalị, enwere ụkọ ogo na enweghị ike ihu igwe ọnọdụ igwefoto Mini Police Body Worn Camera, 1296p, 170Deg, 12 Hours, GPS, Visual Night (BWC010) na mgbochi mmiri anaghị adabara maka ihu igwe niile.
Ndị ọrụ na-ejikarị igwefoto ahụ maka nchekwa, ha ga-achọrịrị sistem. Teknụzụ a na - eme ka ekwenye maka bulite vidiyo n'ọhịa, ọtụtụ BWC na - abịa dị ka usoro nke gụnyere "ọdụ docking". Stationslọ ọrụ na - ebugharị ụgwọ na - akwụ ụgwọ maka BWC, sistemụ dị elu na - ebufe ma ọ bụ bulite ndekọ dijitalụ na sava ma ọ bụ nchekwa igwe ojii. Maka ọtụtụ ụdị BWC, onye uwe ojii ga-edobe igwefoto igwe ojii na ọdụ ụgbọ mmiri mgbe ọ na-alọghachi na ngalaba ahụ mgbe ọ gbasịrị mgbanwe. Ọ bụrụ na edebeghị ma ọ bụ kpado vidiyo vidiyo ndị mbụ, onye uwe ojii ma ọ bụ onye ọzọ na ngalaba ahụ nwere ike ịme ya n'oge a. Anyị na-enye ọdụ ụgbọ mmiri 8, ọdụ ụgbọ mmiri 10, ọdụ ụgbọ mmiri 12, ọdụ ụgbọ mmiri 20 yana kwa ọdụ ụgbọ mmiri 8 nwere ọdụ ngosi na ndị ahịa anyị.
Nchoputa ufodu n’eme ka anyi puta uzo ato n’eme ka uzo gosiputa vidiyo.
Atọ usoro iji nwekwuo nghọta igwefoto ahu
Ndị isi ndị uwe ojii ga-ahụrịrị na ndị isi ha na-agbaso ụkpụrụ ngalaba maka mgbali igwefoto na ojiji. Ọtụtụ ngalaba na-enye iwu ka ndị ọrụ rụọ igwefoto ahụ ha mgbe ha na ndị mmadụ na-emekọ ihe. Mana nrube isi na-adịkarị ala, ebe ụfọdụ ndị ọrụ na-eme ka igwefoto ha rụọ ọrụ na-erughị pasent 2 nke ihe omume. Ọ bụ ezie na teknụzụ ọhụrụ nwere ike imezi nnabata ndị uwe ojii dịka igwefoto na-agbanye onwe ya mgbe a na-ezipụ oku ma ọ bụ na ngalaba akụrụngwa ngwa agha ga-arụ ọrụ ka mma nke nsuso nnabata ma kpoo ya mgbe ndị isi anaghị eso ụkpụrụ.
Ndị ọrụ uwe ojii ga-agwa ndị mmadụ ha zutere mgbe igwefoto ahụ ha na-edekọ. N'ọtụtụ ngalaba ndị uwe ojii, atumatu na-atụ aro mana anaghị enye iwu ka ndị uwe ojii gwa ndị otu obodo mgbe agbanyere igwefoto ha ma na-edekọ. N’ihi nke a, ọ bụ mmadụ ole na ole maara igwefoto mgbe ha na ndị uwe ojii zutere.
Ngalaba kwesịrị ịrụ ọrụ ngwa ngwa o kwere mee ịhapụ igwefoto igwefoto site na ihe omume profaịlụ dị elu na ihe ndị ọzọ na-arịọ. N'ọtụtụ steeti, ọha na eze nwere ike ịnweta eserese site na arịrịọ ndekọ emeghe. Mana usoro a nwere ike igbu oge mgbe eserese ahụ bụ akụkụ nke nyocha na-aga n'ihu ma ọ bụ mgbe ọ nwere nkọwa (dị ka ihu, akara akwụkwọ ikike, ma ọ bụ ozi nzuzo) nke a ga-emezigharị tupu ịhapụ ya.
Igwefoto wearable na-esonye na ọtụtụ teknụzụ nke ga-enyere ndị ọrụ mberede aka rụọ ọrụ nke ọma na n'udo. Ugbu a, nkọwa zuru ezu na-eme mkpebi banyere kamera ahụ na akụrụngwa ha na-akwado ya ọ dị mfe ịnwere ngwaọrụ ọhụrụ na ikike nkwukọrịta a ma mee ka ha nweta ọtụtụ ndị ọrụ n'ọdịnihu.
Odi mma, PC f., Nd [Online]
E Nwere na: https://pceinc.org/wp-content/uploads/2018/03/20180301-Police-Body-Worn-Cameras_What-Prosecutors-Need-to-Know-White-and-Case-and-PCE.pdf
Gogol, I., 2016 / 01 / 18. asmag.com. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.asmag.com/showpost/19727.aspx
Nchịkwa, E., nd [Online]
E Nwere na: https://www.nccpsafety.org/assets/files/library/Handbook_for_Public_Safety_Officials-_Body_Camera_Program.pdf
Peterson, B., Mee 29, 2018. URBAN INSTITUTE. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.urban.org/urban-wire/three-ways-police-can-use-body-cameras-build-community-trust
Ngwaahịa, nd Ntinye iwu Iwu OMG - Igwefoto Worn Ara (DVR / WIFI / 3G / 4G) / Nchịkwa Ihe Nlere Digital - Singapore. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://omg-solutions.com/body-worn-camera/
Nchebe, R., nd Nchekwa Rewire. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.rewiresecurity.co.uk/blog/body-worn-camera-cctv-security
Nzuzo 6532 2 Echiche Taa